पाठ्यपुस्तक छपाइमा बलमिच्याइँ — janadristi
पाठ्यपुस्तक छपाइमा बलमिच्याइँ
१ असार २०७७, सोमवार ०५:२४
काठमाडौं : निजी प्रकाशनगृहले लकडाउनको मौकामा सरकारबाट स्वीकृति नलिई विद्यालय तहको पुस्तक छापेर बेच्न थालेका छन्। यसले पुस्तक बजारमा विकृति ल्याएको छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण चर्को मूल्यका पुस्तकको भार अभिभावकले थेग्नुपरिरहेको छ। तर, आफूखुसी गर्ने प्रकाशनगृहलार्ई सरकारी निकायको कमजोरीका कारण कारबाही भएको छैन।
थुप्र्रै प्रकाशनगृहले कक्षा १ को पुस्तक स्वीकृति नलिई छापेको पाइएको छ। वैशाख १ गते सुरु हुनुपर्ने नयाँ शैक्षिक सत्र कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण त्रासका कारण अनिश्चित बने पनि पुस्तक भने बजारमा गइसकेको छ। स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका प्रकाशनगृह भने अलमलमा परेका छन्।
नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनहरि बस्याल केही प्रकाशनगृहले सरकारबाट स्वीकृति नलिई पुस्तक छापेको स्वीकार गर्छन्। तिनीहरूको कमजोरीका कारण समग्र व्यवसायीलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार केन्द्रले गत पुस मसान्तभित्र अतिरिक्त पुस्तक छाप्न चाहने व्यवसायीलाई मस्यौदा पेस गर्न सूचना जारी ग¥यो। ३० प्रकाशकले आफूले छाप्न चाहेको पुस्तकको मस्यौदा पेस गरे। केन्द्रले त्यसलाई सुधार गरेर बुझाउन, त्यसपछि मात्र छपाइ गर्न फागुन अन्तिम साता निर्देशन दियो। तर, त्यो प्रक्रिया चल्दै गर्दा लकडाउन गरिएपछि व्यवसायीले सुधार गरेको मस्यौदा बुझाएनन्। जसका कारण केन्द्रले अध्ययन गर्न पाएन। तर, सुधार गरिएको पुस्तक पेसै नगरी प्रकाशनगृहहरूले आफूखुसी पुस्तक छाप्न थालेका हुन्।
त्यसरी मनपरी पुस्तक छाप्नेमा ऐरावती प्रकाशन, निरन्तर प्रकाशन, युनिक एजुकेसनल पब्लिकेसन, एसिया, जेडीबीलगायत थुप्रै संस्था छन्। यी संस्थाले छापेका पुस्तकको माथिल्लो भागमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति प्राप्तसमेत उल्लेख छ। कक्षा १ का विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरी नेपाली, अंग्रेजी, गणित, मेरो सेरोफेरोलगायतका पुस्तक यी प्रकाशनगृहले छापेका छन्।
कागजपत्र अख्तियारको नियन्त्रणमा
स्वीकृति नलिई पुस्तक छापेर बजारमा लगेको गुनासोपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केन्द्रमा छापा मारेर सम्बन्धित कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ। केन्द्रका महानिर्देशक दाहालका अनुसार अख्तियार टोलीले केही दिनअघि नीजि प्रकाशनगृहले पुस्तक स्वीकृतिका लागि बुझाएका निवेदन, त्यसबारे केन्द्रले गरेको निर्णय तथा दर्ता र लेखकहरूको सूची पनि लगेको हो। केन्द्रका विज्ञले निजी प्रकाशनगृहका लागि पुस्तक लेख्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा पनि अख्तियारले चासो राखेको छ। यस विषयमा अध्ययन भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएपछि पुस्तक छपाइका लागि स्वीकृति दिन थप ढिलाइ हुने भएको छ। जसका कारण निजी प्रकाशनगृहको लगानी धरासायी हुने व्यवसायीको गुनासो छ।
पाठ्यक्रमका महानिर्देशक दाहाल यो वर्ष कक्षा १ को पुस्तक छाप्न अनुमति नदिएइकाले पुस्तक बजारमा गएको वा नगएको भन्ने विषयमा जानकारी नहुने बताउँछन्। सरकारी स्वीकृतिबिना पुस्तक नछाप्न र बिक्रीवितरण नगर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अनुरोध गरिसके पनि अनुगमन गर्न भने नसकिने उनी बताउँछन्।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा. तुल्सी थपलिया भने केन्द्रीय स्तरमा रहेको अनुगमन समितिले सबै स्थानीय स्तरमा पुगेर अनुगमन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। केन्द्रले कोरोना प्रभावमा परेको विद्यालय तहको पढाइलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा काम गरिरहेकाले पुस्तक बिक्रीवितरणबारे अनुगमन गर्न नभ्याएको उनको भनाइ छ।
कहाँ पुगेको थियो प्रक्रिया ?
० पुस मसान्तभित्र पुस्तकको मस्यौदा पेस गर्न सूचना।
० ३० निजी प्रकाशनगृहले पेस गरे मस्यौदा।
० सुधार गरी बुझाउन, त्यसपछि मात्रै छपाइ गर्न फागुन अन्तिम साता निर्देशन। ० लकडाउन भएसँगै व्यवसायीले बुझाएनन् सुधार गरेको मस्यौदा।